संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म एमसीसीको बजेट कार्यान्यवन नहुने
मुख्य पृष्ठवाग्मतीसंसदबाट अनुमोदन नभएसम्म एमसीसीको बजेट कार्यान्यवन नहुने
विराटनगर, १९ जेठ । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट निर्णय नहुदासम्म यथावत रहने बताएका छन ।
प्रतिनिधिसभाको सोमवारको बैठकमा बजेट छलफलमा उत्पन्न प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले एमसीसीको सहयोगमा बजेटमा गत तीन वर्ष देखि नै कार्यक्रम हुदै आएकोले आगामी वर्षको बजेटमा पनि कार्यक्रम राखिएको तर संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म यथावत रहने बताएका हुन ।
संसदमा जवाफ दिदै उनले भने , ‘त्यो कार्यक्रमको अमेरिकी सहयोगको रकम त्यो बेला मात्रै निकासा हुन्छ जनुबेला संसदमा विचाराधिन रहेको सम्झौता पत्र संसदले अनुमोदन गर्छ । त्यो नगरुन्जेल त्यो यथावत नै रहन्छ ।’’
एमसीसी परियोजना अन्तरर्गतको कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख भएको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।
कोभिड ५० र कृषीकालागि ८० अर्ब
अर्थमन्त्री खतिवडाले कोभिडको समस्या समाधानका लागि एसियाली विकास बैंकसँगको सहयोगमा ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट सपोर्ट सम्झौता गरिएको जानकारी गराए । उनका अनुसार विश्व बैंक, युरेपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एआईबीले समेत कोभिड समस्यामा थप सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व धेरै संकलन हुँन सक्दैन भनेकै कारण चालु बजेटको अनुमानमा पनि १० प्रतिशत कम गरेर अनुमान गरिएको बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसअभिघ साढे २ प्रतिशत रकम खर्च हुनेगरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गराए ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब मात्रै छुट्याइएको सन्भर्दमा उनले महामारीका नियन्त्रणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पनि कामहरु भइरहेकोले अहिलेका कृयाकलाप पनि हेर्न आग्रह गरे ।
कृषि क्षेत्रका लागि ८० अर्ब बराबरको बजेट छुट्याइएको अर्थ मन्त्री खतिवडाले जानकारी गराए । उनले कृषि भनेको उत्पादनमा चाहिने कृषि सामग्री मात्रै भए भूमि, सहकारी ,सिं उर्जा समेत पर्ने भएकोले सबै मन्त्रालयमा अलग अलग बजेट बिनियोजन भएको बताए ।
कृषिकालागि धेरै कार्यक्रमहरु प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि जाने भएकाले फराकिलो ढंगले हेर्ने आग्रह गरे ।